လေ့လာမှုပိုကောင်းတဲ့ဆေးကဘာလဲ။ NOOPEPT ဒါမှမဟုတ် MODAFINIL? - သတင်း
ပိုကောင်းတဲ့လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကဘာလဲ: Noopept သို့မဟုတ် Modafinil?
သင်၏မိခင် မှလွဲ၍ လေ့လာခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတားမြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။ (သူမထင်မြင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးဟူသောစကားလုံးကြောင့်ဖြစ်သည်) တကယ်တော့လေ့လာမှုပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ပျက်စရာလိင်နှင့်နေ့ခင်းဘက်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းစသည့်တက္ကသိုလ်၏အတွေ့အကြုံ၏တစိတ်တပိုင်းသာဖြစ်လာသည်။
ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဆန့်ကျင်သောလူများစွာသည်အားကစားတွင်စတီရွိုက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မှိုင်းအငြင်းပွားမှုများကိုဖော်ထုတ်ကြသည်။ သို့သော်ဤအချက်သည်သံသယဝင်သူများထဲတွင်အခိုင်အမာအခိုင်အမာပင်လျှင်အနည်းဆုံးစာမေးပွဲရာသီအတွင်း၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ကူးဖြင့်ကစားလိမ့်မည်။
တစ် ဦး နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသိချင်စိတ် ပြည့်စုံ ပြန်လည်တည်းဖြတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုမရှိခြင်းကြောင့်တရားဝင်ရရှိနိုင်သည့်လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးဖြစ်သော Modafinil နှင့် Noopept တို့ကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
Noopept (သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်တွင်လူသိများသည်ကဲ့သို့ noopy) သည်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာကြသောရုရှားမှစမတ်ဆေးဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည်အများအားဖြင့်အမှုန့်ပုံစံဖြင့်သောက်သုံးသည်နှင့်အမျှ၎င်းဆေးသောက်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာ Scarface မှ Al Pacino ကဲ့သို့ပင်၎င်းကို snort လုပ်ရန်ဖြစ်သည် ။ သေးငယ်သောအမှုန်အရွယ်အစား (၂၀ မီလီဂရမ်) နှင့်အမှုန့်ကိုယ်နှိုက်သည် (အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောနိမိတ်လက္ခဏာ) ကိုမြည်းကြည့်နေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်ထိပ်တွင်ရှိနေသောအထူးဆိုးရွားသည့်အရသာတစ်ခုထက် ပို၍ မှတ်သားစရာအပြောင်းအလဲမရှိပါ။ အများဆုံးမှာ, ငါသည်ငါ့အလုပ်အပေါ်အနည်းငယ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဒီခံစားချက်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။
ငါမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကမှတ်ဉာဏ် / သိမြင်မှု function ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဤတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့အတှေ့အကွုံအတွက်မဖြောင့်မယ့်တောင်းဆိုမှုများကနေဝယ်ယူခဲ့သည်။
နိုးနိုးကြားကြား - ၂/၅
အာရုံစူးစိုက် - ၃/၅
ကြာချိန် - 1/5
ယေဘုယျအား - ၂/၅
ဦး dildo အဘို့အဘယ်သို့သုံးနိုငျ
စာပို့ခနှင့်ထုပ်ပိုးထားခြင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလျှင် 20p ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သည်။
ဤလူကြိုက်များသောစမတ်ဆေးကိုနာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ADHD ကိုကုသခြင်းမှသည်ကိုကင်းမှီခိုမှုထိန်းချုပ်ခြင်းအထိအားလုံးပါဝင်သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရကျွန်တော်တို့ထဲက ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ကဒီဆေးကိုတက္ကသိုလ်မှာယူခဲ့ကြတာလေ။
ငါအကြံပြုထားတဲ့နေ့စဉ် 200mg ပမာဏကိုနံနက်ယံ၌ယူ။ မိနစ် 30 ခန့်အကြာတွင်ကွဲပြားမှုများကိုသတိပြုမိလာတယ်။
ငါသတိထားမိသည်မှာသိမ်မွေ့သောစိတ်ဓါတ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအပေါ်အကောင်းမြင်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလောက်အောင်ပျင်းစရာအကြောင်းအရာများပင်သည်းခံနိုင်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြံအစည်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်ဖတ်သောအမြန်နှုန်းနှင့် ဦး နှောက်ကဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်ကိုလည်းတိုးပွားလာပုံရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါပထမ ဦး ဆုံးတစ်နှစ်စာမေးပွဲ (40 ရာခိုင်နှုန်း motherfuckers) ငါအဘို့အပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့ငါ့ကိုကြောက်လန့်ဖို့ကအကြောင်းအလုံအလောက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအဘို့ငါပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကကျွန်မရဲ့အခြိနျအခြိနျကာလကိုလှုံ့ဆျောပေးလိုတဲ့ကြှနျုပျတို့၏ဆန်ဒကိုမမှနျဘူး။
တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်ငါးမိနစ်အနားယူမှုသည် ၃၅ မိနစ်ကြာ YouTube ၌ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်
အမှန်မှာ၊ Modafinil ကိုအသုံးပြုစဉ်ခဏအနားယူရန်အကျိုးရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာအစားအစာအတွက်ဖြစ်သည်၊ ယင်းကသင့်အားဆန္ဒနည်းပါးစေသည် (အစားအသောက်ပရိတ်သတ်များကသတိပြုမိစေသည်) ။
လေးနာရီမှငါးနာရီခန့်အကြာတွင်နိုးနိုးကြားကြားရှိကြောင်းသိသာထင်ရှားသည့်ခံစားမှုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည် Azeem's flute ရွတ်ဆိုထားသောစာမျက်နှာပေါ်မှပို့စ်များကိုခါးစွာလှိမ့်ချန်ထားခဲ့ကာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းထက်ပိုမိုကျေနပ်အားရစေသည်။
ပိုဆိုးတာကပိုရှည်လျားလွန်းတဲ့ half-life ကြောင့်ငါမနက် ၄ နာရီအထိအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ အိပ်ဖို့လည်းမနိုးဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Modafinil ငါ့ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငှါငါကငါ့စားပွဲခုံနှင့်အလုပ်မှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်ခဲ့သည်တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုအဆင့်ကိုမတိုးတက်စေခဲ့ပါ။
Jeffrey Epstein တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ကျလဲ
နိုးနိုးကြားကြား - ၄.၅ / ၅
အာရုံစူးစိုက် - ၄/၅
ကြာချိန် - ၃/၅
ယေဘုယျအား - ၃.၈ / ၅
၎င်း၏ online စျေးနှုန်း 200mg ဆေးပြားနှုန်း£ 1.20 (အကြံပြုသောက်သုံးသော) မှာစျေးနှုန်းနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်လည်းစျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ငါအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစျေးနှုန်း tag ကိုအပြစ်လွတ်သလိုပဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသင်ရွေးချယ်မည်ဆိုလျှင် Noopept ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသောဆေးပြားများနှင့်အမှုန့်များနှင့်သင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနှင့်။ Modafinil ကဲ့သို့သောအရာသည်အမှန်တကယ်ထိရောက်သော၊ စွဲလမ်းရန်နှင့်အခြားကျောင်းသားများကအကြံပြုထားခြင်းမရှိသောအရာများသည်များစွာပိုကောင်းသည်။